हिँडेको अमेरिका, पुगे वेश्यालय ! प्रतिकार गर्न खोज्दा बाटोमा मारेर फाल्ने धम्की - Sidha News
हिँडेको अमेरिका, पुगे वेश्यालय ! प्रतिकार गर्न खोज्दा बाटोमा मारेर फाल्ने धम्की
सजिलै बारमा पुर्‍याउँछन्
एजेन्टको प्रलोभनमा परेर अमेरिका रोजगारीका लागि हिडेका कतिपय युवती स्वदेश फर्किन सक्ने अवस्था नभएपछि थाइल्याण्ड र आफू पुगेको देशका बार/क्लबमा काम गर्ने बाध्य हुनुपरेको रक्षाले जानकारी दिइन्।
नेपालबाट अमेरिका भनेर भारत र थाइल्याण्डबाट विभिन्न देशका बारमा काम गर्ने नेपाली महिला लैजाने गरेको थाहा पाएको उनले बताइन् । ‘बीबीए पास गरेर बेरोजगार बसेको थिएँ । गाँउका एक जना दाइले थाइल्याण्ड हुँदै अमेरिका लैजाने मान्छे छ भन्नुभयो । त्यसपछि मैले नि परिवारमा सल्लाह गरेर अमेरिका हिडेको थिएँ । झण्डै थाइल्याण्ड र सार्बियाको वेश्यालयमा बेचिएँ,’ उनले भनिन् ‘एजेन्टले थाइल्याण्ड पुगेपछि अब अमेरिका जानु छ । यहाँ मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भनेर विदेशी नागरिक भएको बारमा पटक पटक पुर्‍याए । थाइल्याण्डमा मात्र होइन रोमानियामा समेत उस्तै बारमा काम गर्न भनेर लगेका थिए ।’
आफूसहित नेपाली महिलाहरुले पैसा र ज्यानका लागि जुनसुकै हदको काम पनि गरेको उनको भनाइ छ ।
देशभित्र अध्ययन सकेपछि रोजगारी नपाउँदा ज्यान जोखिम राखेर विदेश जान खोज्दा बाध्यताले बेचिनुपरेको रक्षा दुखेसो पोख्छिन् । रोजगारीका लागि अमेरिका, क्यानडा हिडेका धेरै युवती विदेशी बार/क्लबमा बेचिएका छन् । स्वदेश फर्किएपछि यो विषयमा प्रहरी र सम्बन्धित निकायमा सूचना दिंदा विश्वास नगरेको उनको भनाइ छ।
रोजगारीका लागि अमेरिका, क्यानडा, अजरवैजान, पोल्याण्ड, साउथ अफ्रिका, स्टोनिया, माल्टा लगायतका देशहरुमा पठाइदिने भन्दै एजेन्टले ठगी गरेको धेरै समस्या लिएर पीडित आउने गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभाग, अनुसन्धान प्रहरी र मानव बेचबिखन ब्यूरोमा राजनीतिक शक्तिको बलमा कन्सल्टेन्सीहरुले शैक्षिक मानव तस्करी गरेका घटनाको चाङ छ । नेपालमा सञ्चालित एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले अष्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, भारत, अमेरिका, जर्मन, बंगलादेश र फिलिपिन्सस लगायतका देशमा विद्यार्थी पठाउँदै आएका छन् ।
कन्सल्टेन्सीहरु विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा यूरोपका लागि आकर्षक जागिरका लागि भन्दै विज्ञापन गरेर ठगी गर्दै आएका छन् । झुठो विज्ञापनमार्फत यूवालाई ठगी गर्ने मनसाय राखेको कतिपय कन्सल्टेन्सीलाई विभागले छापा हान्दै आए पनि नियन्त्रण हुनसकेको छैन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६५ हजार विद्यार्थी विभिन्न देशका कलेजमा अध्ययनका पुगेका थिए ।